XOG: Xildhibaano mooshin ka wada Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland - Awdinle Online
XOG: Xildhibaano mooshin ka wada Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland
In ka badan 28 xubnood oo ka tirsan Baarlamanka Puntland, ayaa la sheegay inay doonaya in ay mooshin ka gudbiyaan Guddoomiyaha Baarlamanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, sida ay xaqiijiyeen mudanayaal diiday in magacyadooda la xigto.
Xildhibaannadaas oo u badan xubnaha laga soo doorto Sool, Sanaag iyo Bari, ayaa Guddoomiyaha ku eedaynaya, in uu ku xad-gudbay Xeer-hoosaadka Golaha iyo Dastuurka Puntland, uuna kala qaybiyay mudanayaasha Baarlamaanka.
Sidoo kale, waxay ku eedaynayan in uu Baarlamanka u af-duubay xukuumadda, taasina ay keentay isku milan ku dhacay Golayaasha Puntland ee Fulinta iyo Xeer-dejint.
Xubno ka tirsan mudanayaasha mooshinka wada, waxay sheegeen in ay weli sugayaan xildhibaanno fasax kaga maqan, islamarkaana ay mooshinka gudbin doonaan markii ay ku soo biiraan xildhibaannada maqan.
Sidoo kale, waxa socda dadaal xooggan oo Madaxweyne Deni uu ku bixinayo in la baajiyo mooshinka, inkastoo weli uusan ku guulaysan dadaalkiisa ku wajahan xallinta muranka u dhexeeya xildhibaannada iyo Guddoonka.
Previous articleCiidamo Cusub oo la wareegay Xarunta Baarlamaanka Puntland
Next articleDiyaarad Shil ku gashay Garoonka Magaalada Garoowe